Lin Shaye: Kirasi yeTenzi mukuita kubva kunaMai vamai veHorror - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Lin Shaye: Kirasi yeTenzi mukuita kubva kunaMai vamai veHorror
Lin Shaye: Kirasi yeTenzi mukuita kubva kunaMai vamai veHorror
yakanyorwa na Waylon Jordan October 11, 2017
Vanotyisa vateveri vanofara! Nhasi izuva rekuzvarwa kwaMiss Lin Shaye! Inofanirwa kunge iri zororo renyika kana chimwe chinhu, handiti?
Iye ari mudiki-anokwana-kutema-mbongoro-yako uye akura-zvakakwana-kuti-aende-pamwe-nayo ane makore uye nenzira dzakawanda ndiyo muyero wegoridhe mukutyisa kuita. Panguva imwe chete mukadzi anotungamira anotyisa uye mutambi wechimiro uyo anogona kunyangarika kuita chero basa, hazvishamise kuti Shaye akaziviswa saMwarikadzi weHorror naWizard World Comic Con muPhiladelphia kumashure muna 2015.
Mashoma mazita akave akakodzera zvakanyanya uye pazuva rake rekuzvarwa inguva yakakwana yekutora nzira yekumusoro yekurangarira kuburikidza nemabasa aakaunza kuhupenyu akaveza mukurumbira iwoyo.
Pasina imwezve nguva, ngatidzokerei kumashure kune gore 1984!
Chirungu Mudzidzisi mu A Nightmare paElm Street
Zvinotora zvakawanda kuti ubude mufirimu umo murume akafukidzwa nemaronda ekupisa ari kuteverera nekuuraya vechidiki muzviroto zvavo. Uye zvakadaro, nekubvuma kwake, kune vanhu vachiri kuenda kuna Miss Shaye nanhasi nezvechinzvimbo chake muWes Craven's A Nightmare paElm Street.
Chinhu chakanakisa uye uchifunga kuti ari pachiratidziri kwemaminetsi maviri. Asi, iyo maminetsi maviri akasimbisa zvakawanda nezvehunhu hwemudzidzisi iyeye. Akaratidza kurera zvakanyanya nekuisa ruoko irworwo pabendekete raNancy kupfuura vamwe vabereki vemusikana vakaratidza mune imwe firimu. Tarisa uone!
Sally mukati Vatsoropodzi uye Critters 2
Rimwe basa diki (ish), kunyangwe chikamu ichi chakawedzerwa mufirimu yechipiri, Sally ainakidza, achifadza, uye aine matambudziko ekusiyanisa chokwadi kubva mukunyepedzera uko kwaive nemaTabloid. Vhudzi rake dzvuku nemiromo yakatsvuka zvakangowedzera kumufananidzo wake usingakanganwike mune ino yekupedzisira 80s chisikwa chimiro. Basa raShaye saSally airatidza kuti aigona kushanda chiitiko mukati nekunze, achidhonza kana kugovana tarisa zvinoenderana nezvaidiwa.
Laura Harrington mukati Dead End
Iwo madiki madiki anotungamira kumabasa akakurisa sevanhu vakatanga kucherechedza tarenda chairo raive Lin Shaye. Akaba show mukati Pane Chinhu Pamusoro paMaria uye Kingpin, uye pasina nguva refu akazviwana achitarisa munaJean-Baptiste Andrea naFabrice Canepa's 2003 horror farce Dead End. Akaridza Laura Harringon, amai vari kuyedza kubatanidza mhuri yavo parwendo rwekuzorora. Kuona Shaye achitenderera kunze kwekudzora kubva kuna amai vane hanya kuenda kumukadzi maniacal mukati mekuparara kwaive nembiri. Handifunge kuti ndinombowana mufananidzo wekuti adye iyo pie yese nemaoko ake kubva mumusoro mangu!
Kana iwe usati wambozviona, wedzera icho kune yako runyorwa rwekufanirwa kuona mafirimu. Iyo yakajeka ensemble, iyo zvakare inosanganisira Ray Wise, inofarira zororo mumba mangu uye inofanira kunge iri mune yako futi. Tarisa tariraira iripazasi kuti uone zvishoma zveyekuita kwaShaye.
Mbuya Boone vapinda 2001 Maniacs uye 2001 Maniacs: Munda weKuchema
Kunyangwe anga achisheedza dhanzi rakakanganiswa zvakanyanya kana kuyeuchidza vanhu nezvehunhu hwavo patafura yekudya kwemanheru, Mbuya Boone vaisafanira kuvhiringidzwa nazvo. Shaye akasvika pafirimu iri, remake yeHG Lewis splatterfest akabatana naRobert Englund, nekushinga uye akagamuchira kuurayiwa kwayo zvese nekufara. Iye anozvipa chose chose kwaari. Izvo hazvina kushamisika paakadzoka zvekupfuurira. Zvaisazove zvakafanana pasina iye…
Elise Rainier mukati Zvisingafadzi Zvitsauko 1-4 uye kupfuura!
Zvakanaka, saka pamwe "nekupfuura" inoshuvira zvachose kufunga, asi uchafanira kundiregerera nekuti ini handidi kuti nyaya dzino dzipere. Miss Shaye vaimanikidza pachiitiko chemasvikiro Elise Rainier zvekuti munguva pfupi akazoona kodzero ichishandiswa kutenderedza iro basa, kunyangwe hazvo akafira mufirimu rekutanga. Mhinduro yacho? Kutanga kudzokera kumashure munguva yekutiratidza kuti Elise aive ani uye kuti akasvika sei pakuva mukadzi watakasangana naye mune iyo firimu. Mumaoko aShaye, Elise akazova mukadzi anonzwira tsitsi, ane simba anogona kunyatso shupika uye akaomarara sezvipikiri zvinoita senge panguva imwe chete. Uye hapana munhu, uye ndinoreva kuti hapana munhu, anokatyamadza nzira iyo Lin anoita nayo mumafirimu aya. Kana mweya wake uye nezwi rake rikazungunuka, ini ndinobva ndatanga kukakama kunyangwe mushure mekuwonekwa kwakawanda.
Paulina Zander mukati Yesja
Kuzvidzwa, Yesja inotarisana neboka revechidiki vanozviwana vachinetswa nemweya mushure mekutamba nebhodhi rakatukwa reOuija. Sezvo ivo vachienda kunotsvaga mhinduro, iro heroine rinoteedzera pasi aimbove mugari wepamusha pakawanikwa bhodhi, asi Paulina haasi chaizvo zvaanoita kunge ari? Shaye aive akanaka mune basa raigona kuve nyore kuve caricature. Akaratidza kutendeseka kwakazara, kunyangwe mukusazvibata kwake. Usanditenda? Tarisa.
.Teresa mukati Jack Anoenda Kumba
Kana, parizvino, chero munhu akambopokana kuti Shaye aive akakomba mutambi ane hunyanzvi hunyanzvi, vanofanirwa kugara pasi vakatarisa Jack Anoenda Kumba. Jack paanodzoka kumba mushure metsaona yakauraya baba vake nekukuvadza amai vake zvakanyanya, anozviona achisangana nenyaya dzaaifunga kuti angadai akasiya kare kare. Shaye anotamba amai vaJack muchiitiko chinoshamisa achitendeuka kubva pakurera kusvika pakutuka nekudzoka zvakare mukubwaira kweziso. Muchidimbu, akapenya. Chese chiito uye maitiro anoiswa zvakakwana uye akaiswa nguva.
Allie mukati Abattoir
Chii chandingataura nezve Lin Shaye mu Abattoir? Mune firimu, mumwe munhu ari kuba makamuri umo kwakaitika mhondi. Mukadzi wechidiki anonzi Julia anoenda kunotsvaga kuti ndiani angave achitora makamuri uye zvavanogona kunge vachishandisa ivo, uye mukuferefeta kwake, anosangana naAllie. Allie anoita kunge akabata mhinduro kumubvunzo wese waJulia, asi kusiya zvakavanzika izvi hakusi nyore sekuda kwese kwaizodai. Shaye anopa imwezve yakatanhamara mashandiro ayo anofamba reza yakatetepa mutsetse pakati pehutsanana uye kupenga, uye anozviita zvakanaka kwazvo! Iyi firimu inotyisa uye mashandiro aShaye anovandudza nguva dzese. Kana usati wazviona, unofanira!
Zvakanaka, varipo. Kungori mashoma emabasa akaburitsa Lin Shaye yaive ngano yaakaziviswa. Iye mutambi wekupedzisira, zvisinei nemhando (chero munhu akamboona Sedona or Detroit Rock City anoziva zvandiri kureva), asi iye acharamba ari amai vedu veHorror.
Yakaratidzwa Mufananidzo naRichard Perry / New York Times
2001 ManiacsA Nightmare paElm StreetAbattoirVatsoropodziCritters 2kufa magumoInsidiousJack Anoenda KumbaLin ShayeWaylon Jordan
8-Bit "Zvinhu zvisinganzwisisike" Matoyi kubva kuFunko Akatungamira Kunangwa munaNovember
Toronto Mushure meRima Firimu Fest: Mafirimu Epamusoro mashanu Hatigone Kuona